Fiaretan-dranomandry | Reef Resilience
Ny fiheverana momba ny fiovan'ny toetr'andro (SST)
Ny fiasan'olombelona, ​​toy ny fandoroana angovo azo avy amin'ny fôsily, ny famokarana simenitra ary ny fandripahana ala, dia nampitombo ny fiakaran'ny hafanam-bozaka tao amin'ny atmosfera. Ny fiakaran'ny gazy karbonika sy ny hafanana hafanana hafanana dia nampitombo ny mari-pahaizan'ny atmosfera, nanamafy ny Tany ~ 0.9 ° C hatramin'ny 1880, ary nomanina ny hafanana azy eo 2-4 ° C amin'ny 2100, amin'ny ankapobeny noho ny asan'ny olombelona. ref Io fitomboana io dia nitarika ny fitomboana mifanaraka amin'ny toetr'andro, indrindra any amin'ny faritry ny ranomasimbe. Ny ranomasimbe mafana kokoa koa dia mety hitarika ho amin'ny heriny mahery kokoa oram-baratra ary mitombo ranomasina, izay mety hisy fiantraikany amin'ny tontolo voajanahary amin'ny vatohara.
Ny fiovaovan'ny elanelam-potoana maneran-tany amin'ny 1950 ka hatramin'ny 2100. Ny fitrangan'ny tsy fahazoana antoka (fialokaloka) sy ny projections dia aseho ho an'ny scenario RCP2.6 (manga) sy RCP8.5 (mena). Sary © IPCC 2013
Ny Corals dia afaka mandefitra ny toe-piainana ety anaty tontolo iainana ary miaina eo akaikin'ny fetra ambony amin'ny faharetany. Noho izany, ny vatohara dia tena mahatsapa ny fiovan'ny hafanan'ny ranomasina. Ny mari-pahaizan'ny ranomasina avo indrindra (ohatra ny mari-pahaizan'ny ranomasina 1-2 ° C ambony noho ny fara-tampon'ny fahavaratra) coral bleaching, ref ary mety hiteraka fahafatesan'ny vatohara, hianjera amin'ny fifehezan'ny vatohara sy ny fiovan'ny mponina amin'ny fambolena sy fiompiana hafa. Raha mihena ny fiakaran'ny hafanam-be, dia mety ho sitrana ny vatohara, saingy raha mitohy ny adin-tsaina dia mety hitranga ny mety maty. Ny SSTs lehibe kokoa dia mitarika amin'ny fitomboan'ny aretina coral disease.
Ny SSTs lehibe mifandraika amin'ny fiakaran'ny masoandro dia mifandray amin'ny haran-dranomasina lehibe fampandrenesana marevaka lehibe. ref Ny hafanam-po sy ny havesatry ny hetsika marevaka lehibe dia andrasana hivoatra satria ny SST dia mbola mafana hatrany eo ambanin'ny fiovaovan'ny toetr'andro, ka miteraka ahiahy lehibe momba ny hoavin'ny haran-dranomasina manerantany. ref Ireo tetikady fanovozan-kevitra dia manolotra fa ny fatran'ny fitrandrahana ho an'ny vatohara dia hihoatra ny taona aorian'ny 2050, raha kely indrindra. ref
Ny fanimbana ny haran-dranomasina vokatry ny fiparitahan'ny fahalotoana sy ny fitomboan'ny fihenan'ny ala dia mety hanimba ny tontolo iainana mifanila aminy, anisan'izany ny ala honko sy ny lakandrano izay miankina amin'ny haran-dranomasina mba hanomezana fialofana amin'ny hetsika. Ny tsindrin-tsakafo ihany koa dia miteraka fihanaky ny fifampiraharahana, fiovàna eo amin'ny lamosin'ny firaisana ara-nofo, ary ny fiovaovan'ny tahan'ny fitomboana sy ny metabolisma ho an'ny ala honko sy ny ahitra. ref Mety hampitombo ny fitomboan'ny algan'ny fifaninanana izay mety hampitombo ny ahi-maitso ary hampihenana ny tara-pahazavana ilaina ho an'ny velona.
Ny fahafahan'ny haran-dranomasina ho acclimate or adapt Ny fiakaran'ny mari-pananana dia lohahevitra fikarohana. ref Raha toa ny fikarohana sasantsasany milaza fa ny fampifanarahana ara-tsakafo sy / na ny fampitomboana dia azo antoka, tsy azo antoka ny fahaizan'ny hara amin'ny fikajiana / fampitomboana ny fiakaran'ny hafanana noho ny haingam-pandeha izay hitombo ny fiakaran'ny mari-pamantarana ary ny toetra tsy azo antoka amin'ny fisehoan-javatra hafakely. ref
GBRMPA fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny vatohara
NOAA Coral Reef Watch Satellites sy Coral Bleaching
NOAA Satellite Remote Sensing and Coral Reef Resources
Ny harafesin'ny haran-dranomasina sy ny fanoherana ny fanoloana
Mitantana ny ala honko amin'ny fahantrana amin'ny fiovan'ny toetrandro
Mitondra ahitra ho an'ny faharetan'ny fiovan'ny toetrandro